The loo baahnayn - Part 21 | Apg29
The loo baahnayn - Part 21
My sii sheeko igu dhaqaaqo sida wiil aan loo baahnayn.
My walaalkiis foster Stig ayaa la xaqiijiyay in kaniisadda Annerstads afar sano ka hor. Ma xasuusan doonaa in uu xaqiijin laakiin sidoo kale waxaan doonayay inay I beeniyaan. Sababta sababta Stig laftiisa xaqiijiyay Anigu garan maayo, laakiin waxaan doonayay in la xaqiijiyay, ma si aad u hesho qaar ka mid ah hadiyado suurtagal ah, laakiin waxa ay si fudud u ahaa sabab u ah danaha dhabta on my qayb.
Marka dib ayaan u eegaa on noloshayda, waxaan fahamsanahay in aan danta xaqiijin ahaa sabab u raadinta ah oo daacad ah oo qoto dheer, waayo, Ilaah. Waxaa la kala diro qalbigayga.
waxbaridda Xaqiijinta ay diyaariso kaniisad Annerstads oo lagu qabtay by wadaad ah. Teaching ahaa qol ku yaal dabaqa labaad ee guriga kaniisadda. Waxaan ahaayeen laga yaabaa in 20 dhallinyarada wiilasha iyo gabdhaha akhriyo.
Laakiin waxaan ogaaday in casharo xaqiijin ahaayeen adag oo adag. Waxaan la mashxarad akhriska ka buug ku saabsan iimaanka Christian in aanan fahmin wax ka mid ah. waxba waan soo xusuusan maanta waxa ka dibna waxaa la baray in ay na catechist. Malaha ma aan mid la xasuusto taariikhda xaqiijinta, taas oo ahayd maalin ka hor dhalashadiisa aan aadan.
Laakiin xaqiijin sida aan gudbin ama ii saamayn sida qof. Weli waxaan ahaa isku jir ah Chris ah. Tani waxaa lagu tijaabiyo dhacdo wax yar ka hor waxaan ku jiray si ay u tagaan kaniisadda oo noo xaqiijin. Oo wadaadka oo catechist oo dhan ayaa soo ururshay qol yar ka hor inta uusan xaqiijin.
Markii aan loo baahan yahay in musqusha, taas oo aan ku sameeyey tagaan. Markii aan soo laabtay, ayaan biyo ku dabbaalan on chemise cad, oo dhan ee bar catechist, markii aan ku gacmo dhaqday. Qof this tilmaamay, laakiin waxaan u maleeyay in aan ku xidhay markii aan kaadinayso, sidaas darteed waxaan ku riday a expletive weyn ku wanaagsan wadaadkii iyo catechist oo dhan hortiisa. Wasiirka ayaa tilmaamay erayo xanuunsan-doortay, oo anna waxaan la yaabay pionröd wejiga. Laakiin sida aynu galay ayaa kiniisaddii iyo Xaqiijinta maray off iyadoo wax dhibaato ah.
Markii aan galay kiniisadda aan i taagay iyo kibir qabtay Kitaabka Quduuska ah iyo kitaabkii ku gabyeen. Laakiin waxa laga yiri inta la xaqiijiyay, waxaan wax fikrad ah.
Waxaan u malaynayaa in aan xiiso dhab ah in xaqiijinta waxay ahayd in Ilaah i doondoonay. Waxa kale oo uu ahaa hadal ah ii ah in aan Ilaah oo aan da 'yar ka doondooneen. Laakiin marna waan ogaa in ay ahayd Ilaah.
Marka dib ayaan u eegaa on noloshayda, waxaan arki dhacdooyinka kale ee markii Ilaah i doondoonay. Waxaa laga yaabaa in dhacdooyinka u muuqda yar, oo aan hore kuu sheegay oo ku saabsan buugga indenna qaar ka mid ah, laakiin waxaa jiray qaar ka mid ah dhacdooyinka in si lama filaan ah u ekaayeen midabka in Ilaah jirta iyo in uu i arkay.
Later, waxaan ku ogaaday in Ilaah ma ahaa Ilaah oo kale ah Santa Claus kuwaas oo ku hanjabay in aan la siin wax kasta oo hadiyado haddii Jirin nooc, laakiin Ilaah lahaa jacayl Maamulka Kililka waayo, ninkii wuxuu yar. Tani Ilaah jecel siiyey wakhti ay ku waqti iyo si ay u dareemaan wax yar wiil la hubin saxariiriyo xoogsheegtay, laakiinse ma uu oqoonin kuu ahaa in garaaceen albaabka qalbigiisa dhallinyarada
Waxaan ahaa dhowr sano ka dib in wadaadku markii hore frikyrkopastor ah. Sidaas daraaddeed ayuu waajibka ku ah inay ku lahaa aqoonta sida si ay u badbaadaan iyo Christian ah, laakiin ma uu sheegin noo. Maxaa dhacaya haddii uu ku sameeyey. Markaas ayaan laga yaabo in ay mar hore ayaa la badbaadiyey oo helay nolol dhan oo aan loo bedelay. murug iyo murugo badan oo laga hortagi lahaa in aan nolosha. Waynayn, uu soo xigtay aayadda cajiib Bible John 3 iyo 16 ee biblars our daboolo. Qoraalka aayaddani waa:
"Waayo, Ilaah dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay, in ku alla kii isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah."
Laakiin uu u sheegay aayadda in Kitaabka Quduuska ah, waxaan ogaaday ilaa dhowr sano ka dib, oo uusan u sheegay ama sharaxay aayadda noo. Xaqiijinta sidaas ma i badbaadi.
Intii aan carruurnimada, waxaa mararka qaarkood laga yaabaa in uu aadayo gudcurka dhex waanada Ilaah. Anigu ma aan ka dibna waxa ay u fahmaan, laakiin markii aan dhowr sano ka dib in dib loo eego oo dib u eegi kartaa on noloshayda, waxaan si cad u arki karin.
Wax noocan oo yaabaa inuu si toos wadnaha ee iga galay waxay ahaayeen boodhadhka la nsturmotiv wanaagsan. Tusaale ahaan, qorraxda gadaashiis geedaha. Qorniinka oo ah in. Waxaan mararka qaar iman kara guud ahaan boodhadhka noocaas ah, tusaale ahaan, in hoolka kaniisadda. Markii aan akhriyey aayaddan Kitaabka Quduuska ah iyaga on, aan wixii awood ay ku jiraan yaabay. Waxay ahaayeen sidaas nool oo aan hadli karin xaq qalbigayga geliyey. Si fiican ayaan u xusuusan hal mar oo kale sida yaabeen oo yaabeen eegaya musawir ah. Waxaa dhacay dhowr jeer oo dhowr jeer oo kala duwan in Ilaah ila hadlay oo wuxuu ka dhigay laftiisa laga yaqaan, kuwaas oo siyaabo kala duwan. Laakiin marna waan ogaa in uu ahaa ilaa sanado badan ka dib.
Ingrid Ljunggren lahaa casharada ku qoran waxbarasho aad u wanaagsan. Inta badan, ayay ii sheegay oo ku saabsan wax is-gartay. Waxa ay ahayd fudud si aad u dhegaysato iyadii, oo waxay qaadan waxa ayay tiri oo dadka wax baray.
Marka hal dhibic on Diinta Waxaan waligey illoobi doonin. Anigu garan maayo haddii ay ahayd Christian ah, laakiin waxay ii sheegeen in iyada iyo ninkeeda ilmaha iyada dhashay ayaa ku soo dhacay xanuunsan oo waxaa la geeyay isbitaal. Markaas ayay goorna Ilaah carruurtooda oo ahaa arrin wanaagsan. Waxay heshay jawaabaha salaadda. Iyaduna sheegay fasalka oo dhan. Waxaan aamusnaan fadhiistay oo dhageystay in amankaag miiska my.
Dugsiga ayaa waxaa ka mid ahaa in aan prya lahaa mararka qaar semester kasta oo meelo kala duwan si aad u hesho bidhaamaysa dunida shaqada iyo malaha heli Hum ka mid ah waxa aan dooran lahaa fasalka sagaalaad, oo aan si cad lahaa mid aad u adag in la ogaado. Tan iyo markii aan ahaa suugaan xiiso Waxaan mar prya Tempo dukaanka waaxda ee Ljungby sida decorator ah. Waxay lahaa shaqaalaha qurxiyeyaasha u gaar ah oo ay calaamadaha sameeyey. Nasiib darro, anigu ma aan si wanaagsan jeclaa oo ay ahayd adag tahay in la qaato initiative. Waxay u badan tahay in ay sabab u ahayd Jidkaygana saxariiriyo oo aan la hubin.
Maxaa yeelay, Times iyo xiisaha ay tahay ahaa hadal simistarka kale oo aan heli lahaa prya toddobaadkii in line imtixaan kulliyadda a Christian in Helsingborg. Psyokonsulenten u suurtagashay in ay i heli waxaa toddobaadkii. Waxaan xusuustaa Waxaan u lahaa in la raaco baska hoos si Helsingborg, inkasta oo aan ka walaacsanaa ku saabsan safar dheer, laakiin waxa ay si fiican u baxay, ka dibna u yimid macallin ka yimid dugsiga oo i soo gaaray. Waxa aan ku noolaa guriga qoyskiisa.
Waxaan fahamsan yahay in ay ahaayeen Masiixiyiin, laakiin anigu ma aan garanaynin waxa ay la micno. Oo mana ay wax ku saabsan this ii sharxay.
fiidkii ah ee kulliyadda, waxaan taagnaa la koox ka mid ah ardayda iyo daawaday qaar ka mid ah ciyaartoyda kubada cagta. Markii aan mid ka mid ah la weydiiyay hadii aan dugsiga, kanu wuxuu ahaa Christian. Markaas ayaan lahaa hadalkay dheer isaga oo uu iska sharaxay Nasaarada. Waxaan ku jiray jawi Christian, laakiin waxba ku saabsan Ciise ma maqlaan. Sidaas dhow weli fog ...
Marka guriga in aan guriga foster, waxaan helay yar oo cad Gidcoon Bible in la Faydatay in armaajo buug ee qowladda. Anigu garan maayo Horay u helay. Waxaa laga yaabaa in ay ahayd walaalkay foster. Ma xasuusan karo in ay taydii ah. Waxaa laga yaabaa in walaalkay u helay markii godeonierna qaybinta Bible New Testament fasalka dugsiga oo uu ku tegey Gidroniter. Waxaa laydiinku yeedhay dhiibteen baxay barsahada ku dhex snmst dugsiyada iyo qol hotel iyo xabsiyada. Waxay ayaa laga qaaday magaca Gidcoon ka dib markii in Axdiga Hore.
Waxaan ka dhigi in fadhiga brown in qowladda for reading. Waxay ahayd Gogol la mid ah in aan fadhiistay in marka wargeyska deegaanka lahaa sheeko aniga iyo sawir aan dhawr sanno ka hor ku saabsan.
Waxaan bilaabay akhrinta ee Matthew ee injiilka oo waxaa iska Suurka by waxa aan akhriyey. Maxaa a reyreyn u ahaa! Anigu ma joojin kari lahaa.
Waxaan wax Ciise ku saabsan akhriska iyo sida ay isaga iskutallaabta lagu qodbay iyo in Ilaah isaga kuwii dhintay ka soo sara kiciyey oo maalintii saddexaad. waxaa dhacdo oo dhan riwaayado ilaa rinjiyeeyay maankayga oo runtii aan u arki karin.
Erayada ayaa ku nool sidii aan akhriyo. Waxay xaq ku kulmay qalbigayga. Waxa aan ahaa kaliya sheeko caadi ah.
RAAC AAN serial u baahnayn
serial Tani waa sheeko naftayda ka carruurnimada iyo wixii ka dambeeyey. Waxaan idinku leeyahay, iyagoo qaawan oo daacad. badan, weligay ma aan idiin sheegay oo ku saabsan ka hor. magacyada qaar ka mid ah in sheekada waa khayaal ah.